Andriandranando - Wikipedia
Ny mpanjaka Andriandranandobe, (niaina tamin'ny taonjato faha-16 aorian'ny jesosy kristy) no razambe nipoiran'ny terak'Andriandranando, atao koa hoe "zanadranando". Avy amin'ny faritry ny ala antsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba hitady zara-tany hanjakana. Zanak'i ny mpanjaka Andriamamilazabe sy Andrianetohento izy. Metisy maley sy arabo i Andriandranandobe. Raha tonga teto anefa dia efa natanjaka ny fanjakan'Andriamanelo teo Alasora sy ny fanjakan-dRabiby teo Ambohidrabiby. Na dia nalaza ho masin'ody aza Andriandranandobe dia tsy mba nila ady na nanosika ireo fanjakan'andriana efa niorona teo Alasora sy Ambohidrabiby fa nanao raharaham-pihavanana tamin'Andriamanelo ka nanoa ity farany no mba nisakaiza tsara tamin'i Rabiby izay araka ny lovantsofina sasany dia raibeny niteraka ny rainy.
Ho mariky io fametraham-pihavanana io dia nomen-Andriamanelo ho vadin-Andriandranandobe i Rasoavimbahoaka anabaviny. Nanana vadikely hafa koa anefa Andriandranandobe.
Ireo andriambavy andriandranando dia miavaka amin'ny andriambavy rehetra satria somary toy ny thailandaise maranidranitra izay izy ireo ary tena tsaratarehy tokoa raha amin'ny andriambavy rehetra.Vokatr'izany dia maro tamin'ireo mpanjaka merina no naka vady andriambavy andriandranando ka ny zanak'izy ireo dia saika nanjaka. Porofon'izany: ny mpanjaka andriatsitakatrandriana dia niteraka an'i andriatsimitoviaminandriandehibe tamin'ny andriandranado vavy atao hoe Ravololontsimitovy; ny mpanjaka andriamasinavalona dia niteraka an'Andriatsimitoviaminandriana tamin'ny andriandranandovavy atao hoe Ratompoindraondriana; ary ny mpanjaka Radama I dia nanambady an-dRasalimo zanaky ny mpanjaka sakalava atao hoe Ramitraho izay manana razana andriandranando.
Telo lahy moa ny zanak'Andriandranandobe dia: - Andriantompoinandriana, lahimatoa ao Ambohimailala, eroa avaratr'Ambohibe; - Andriakomahitsy, lahiaivo, tao Ambohibe izay tendrombohitra avo tokoa izay ahitana farihy masina fandevenana ny taovan-ireo zana-dranando tamin'izany; - Andrianifantsy kosa dia eroa amin'ilay tampotanety atsimon'Ambohibe atao hoe Manankasina-Ambohipotsy akaikin'ny misy ny cité ny père pedro ankehitrio;
Ho takalon'izany raharaham-pihavanana sy fanoavana izany dia tsy mba nataon-dRalambo ho isan'ny folovohitra ny taranak'Andriandranandobe fa notazominy ho andriana, Andriandranandobe rahateo dia havana akaikin'ireo mpanjaka teo Alasora sy Ambohidrabiby ihany.
Tamin'ny fanjakan'andriana kosa dia ny fanefena vy no tena nahafantarana azy ary ankoatr'izany dia maro aminy koa no manenona lamba landy.
Maro tamin'izy ireo koa anefa no nieli-patrana eran'ny nosy indrindra amin'ny faritr'i Fianarantsoa iny talohan'ny taona 1896.
Nihely tamin'ny vohitra manodidina an'Ambohibe ny terak'Andriandranando" : Ambohimailala, Ambohibe, Betsizaraina, Soamanandrariny, Iadiambola, Masinandriana, Manankasina ary Ampomanjaka, Ambato ao Ambohimangakely, Ankadindramamy, sns....
Tsy mba isan'ireo loharanon'Andriana nipoiran'ireo andriana merina arak'izany ny andriandranando nefa kosa dia nanjaka zanaka izy satria nohon'ny fifanambadiany tamin'ireo andriana merina dia nipoiran'Andriamasinavalona mpanjaka izy.
Raha ny lovantsofina dia tsy mba nanjaka i Andriandranandobe. Anefa ny porofo arkeolojika dia mandiso izany satria raha ny vohitr'Andriandranando no jerena dia manana ny fepetra rehetra saika hita amin'ny tendrombohitra 12 izy. Ambohibe ohatra dia sady avo no misy farihy masina eo amin'ny tehezany.
Arak'izany, isan'ireo andriateloray ny andriandranando, koa tamin'ny antanantohatr'andriana dia teo aorian'ny andrianamboninolona sy eo anoloan'ny zanadralambo no misy ny andriandranando.
Marihina koa anefa fa nisy foko hova, nohon'ny soa nataony tamin'ny andriana no nakarina ho andriana ho isan'ny andriandranando.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriandranando&oldid=978579"
Dernière modification le 19 Desambra 2019, à 15:32
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2019 amin'ny 15:32 ity pejy ity.